UMlingani Wakho OTHEMBEKILE WE-OEM / ODM - Umkhiqizi Wokukhanya Kwe-LED
Kwaholela Ukukhanyisa Kwangaphakathi
Ukukhanya kwe-Tri-proof Led
Kwaholela Ukukhanyisa Kwangaphandle
Ukukhanya Kokukhanya Kwezikhukhula
I-Led grow Light
Led Strip Ukukhanyisa
Uzakwethu Othembekile we-OEM / ODM we-LED Lighting
Umkhiqizi wokukhanya we-LED okhokhelwayo unikezela nge-OEM / ODM service
Umgomo wethu ukwanelisa amakhasimende ethu ngobuciko obuphezulu nangekhwalithi ethembekile ukuqinisekisa ukuthi wonke amakhasimende angazizwa ekhululekile futhi ezethembile ngezimpahla zethu ezinhlelweni zawo.
Khanyisa Flood (B Series Flood Khanyisa)
Ukukhanya Kwezikhukhula ze-LED Uchungechunge olusha lwezikhukhula ze-LEDIA luhlanganisa ukusebenza kahle kwamandla, ukulawula okuthuthukile kwe-optical, kanye ne-aesthetics yesimanje ye-slim profile ukuletha ukusebenza okuthuthukisiwe kuzinhlelo zokusebenza zokukhanyisa izikhukhula. Izindlu ezimangelengele zokufa zinikeza ukuphathwa okushisayo okuthuthukile kwempilo ende kanye nendawo yokuqinisekisa isimo sezulu ukumelana nezindawo eziyinselele, zangaphandle. Umsebenzi Omkhulu Housing Izindlu ze-aluminium eziqinile. Lens ilensi yengilazi emnene imelana nokushaqeka nomthelela. Proof Ubufakazi bokugqwala nokugqwala, impahla ye-powder yemvelo. LED Ama-LED ebanga eliphezulu lomkhiqizo, okuphuma kakhulu, impilo ende. Reflect Ukukhanya okuphezulu okukhanyayo okuphezulu nokukhanya kwengilazi engu-4mm ubukhulu. Option Inketho yesikhathi sasemini. Finishing Imibala yethusi neyenziwe ngokwezifiso yokumboza impuphu
Flood Khanyisa Street Light
AC100-27V / AC220-240V; Abakaki entabeni / Wall Mount / Pole Mount, Daylight Inzwa, IP65, Gray / Black Qeda, 5 Iminyaka Iwaranti, 4000K / 5000K / 6000K.
Amapheshana Wangempela we-IP68 Led
Umugqa wangempela we-IP68 we-LED, ofanele ukusetshenziswa kwangaphandle, olungele ukusetshenziswa ngaphansi kwamanzi. Umugqa oguquguqukayo we-IP68 / ukukhanya kwetheyiphu ye-IP68 / ukukhanya kwentambo ye-IP68 / umugqa oguquguqukayo ongaphansi kwamanzi / Ithebhu yangaphansi kwamanzi / umugqa oguqukayo wedamu lokujikisa / Itheyipu yokukhanyisa iphuli. Ifanele ukujikisa echibini, ukukhanya kwesinyathelo sangaphandle, ukukhanya kwangaphandle okuhlobisa njll.
I-COB Flex Strip - Ukukhanyisa kwe-LEDIA
1. Uchungechunge lwe-COB Flex, umndeni we-COB flex otholakala ngombala owodwa, okulungiseka okumhlophe, i-RGB ne-digital RGB. 2.Umbala omhlophe we-COB Flex, Ungatholakalela i-DC12 / 24V, Min. ububanzi 3mm. 3. Umbala owodwa we-COB Flex, otholakala ngokubomvu, oluhlaza okotshani, ohlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, o-Amber njll. Umugqa we-COB flex, ukukhanya okuqhubekayo okungenachashazi, ukusebenza okuhle kokukhanya, i-CRI ephezulu. Isibani se-COB esiguqukayo / isibani se-COB / isibani se-COB esingenachashazi / isibani se-COB esingenachashazi Ifanele ikhava yokukhanya
Izinkampani ezihamba phambili zokukhanyisa emazweni omhlaba
Selokhu yasungulwa, i-LEDIA ibigxile ekunikezeni insizakalo ye-OEM / ODM nokwenza imikhiqizo ehlukahlukene eyenziwe eyenziwe kozakwethu.
1. Uphenyo: Amakhasimende atshela into oyifunayo yefomu, imininingwane yokusebenza, umjikelezo wempilo, nezidingo zokuhambisana.
2. Umklamo: Ithimba lokuklama liyabandakanyeka kusukela ekuqaleni kwephrojekthi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo eklanywe kahle kakhulu evumelana nezidingo zamakhasimende ..
3. Ukuphathwa Kwekhwalithi: Ukuze sihlinzekele ngezakhiwo ezisezingeni eliphakeme, sigcina sisebenza kahle
& Uhlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi olusebenzayo.
4. IMass Production: Uma ama-prototypes eseqinisekisiwe ngokwakhiwa ngokwefomu, ukusebenza, kanye nokufunwa, ukukhiqizwa isigaba esilandelayo.
5. Singakwazi ukuhlelela izinto zokuhamba ngama-oda - kungaba ngezinsizakalo zethu zangaphakathi, abanye abahlinzeki noma inhlanganisela yakho kokubili.
Isibani sokuboniswa kwangaphandle
Ulayini womugqa wasendlini
Isibani somgwaqo ongaphandle
Eyasungulwa ngonyaka ka-2004, i-Guangzhou LEDIA Lighting Co., Ltd iyibhizinisi lombuso eliphakeme eliseGuangzhou, China, inkampani engaphansi kweHongliZhihui Group (Umkhiqizi wephakethe we-LED ophakeme kakhulu eChina). Ngonjiniyela abanolwazi abangaphezu kwama-30 kanye nelebhu yokuhlola ye-CNAS, ukuphathwa kohlelo lwe-ISO 9001/14001, i-LEDIA ibilokhu ihlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kozakwethu abahlonishwayo emhlabeni jikelele, kufaka phakathi i-LED Outdoor Lighting, i-LED Industrial Lighting, i-LED Commercial Lighting ne-LED yokuhlobisa okukhanyisa zonke ziyi-DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC efanelekile.
Kusukela isisekelo sayo, i-LEDIA ibigxile ekunikezeni insizakalo ye-OEM / ODM nokwenza imikhiqizo ehlukahlukene eyenziwe eyenziwe kozakwethu. Ngesikhathi sithuthuka ngokushesha, i-LEDIA iyajabula ukubona ozakwethu bekhula futhi beqina ezimakethe zabo futhi bafisa ukuqhubeka nobudlelwano bethu obuqinile eminyakeni ezayo!